BN VERTICAL AND HORIZONTAL CLOSED-DIE ROLLING Machine Famehezana rano sy famehezana menaka amin'ny loha rotary, androm-piainana lava. Tsy misy tsindry ram na mitabataba rehefa miasa. Ny vokariny avo lenta, mamirapiratra sy madio, habe marina. Izy io dia namokatra vokatra matevina kely toa ny famokarana fitaovana, ny famokarana flange, sns. BN AXIAL CLOSED-DIE ROLLING MACHINE SPECIFICA ...
GZJY FITORIANA FANORENANA HYDRAULIKA FANOFANANA Fitaovana feno-hydraulic, mandroso sy mirindra ny famolavolana ny rafitra hydraulic; Ireo faritra mekanika amin'ny fanatsarana ny endrika, firafitra mirindra ary mora; Ny herin'ny hetsika mihazakazaka haingana; Tsotra sy mora ny famolavolana sy ny fikarakarana ary ny fikojan'ny mpampiasa. Fifandraisana an-tanana, semi automatique, mandeha ho azy miaraka amin'ny milina fanoratana. PARAMETER TABER: Model 1T 2T 3T 5T ​​8T 10T 15T 20T 30T 40T 50T Misy laharana fahaizana (KN) 10 20 30 50 80 100 150 200 300 400 500 Tong ...
ZDYJ-B MAIMAIMPOANA NY FANONTANIANA HYDRAULIKA
ZDYJ-B MAIMAIMPOANA NY FANONTANIANA HYDRAULIC PRESS ZDYJ-B andiany, fanontana hosoka maimaimpoana dia ampiasaina matetika amin'ny famolavolana teknolojia fanodinana fitaovana vy, ao anatin'izany ny fanitarana bileta, fikorontanana, fikapohana, fametahana soavaly soavaly, fanodinana, fihodinana, famorohana sns. Ny firafitry ny rafitra TS telo andry efatra-couimn style, ny ampahany lehibe amin'ny tranofiara, fiara mifono solika, toeram-piasana finday ary faritra hafa ary ny rafitra familiana hydraulic, ny rafitra fanaraha-maso herinaratra, ny rafitra fanosotra, mifamatotra mba hamorona iray manontolo amin'ny ...